HomeWararka MaantaHenry iyo Redknapp oo Fool-ka-Fool Isu Wajahay Sidii Mayweather vs Pacquiao
Iyadoo uu laba todobaad oo qudh ahi inaga xigo maalinta xayndaabka la isugu xarayn doono labada feedh yahan ee Floyd Mayweather iyo Manny Pacquiao, oo lacagtii ugu badnayd ku kala hellaya ciyaartaas feedh-feedhka ah , ayaa waxaa isa soo taraya maalinba maalinta ka dambeysa xiisaha loo qabo daawashada ciyaartaas.
Dagaalkan labada nin oo ay dhex taalo aduun dhan $300million, shaki la’aana waa lacagtii ugu badnayd taariikhda ciyaaraha aduunka ee Laba ciyaaryahan ku loolamaan lacag intaas leeg.
Telefishanka ciyaaraha ee Sky Sports ayaa sii daayay ,muuqaalka Jamie Redknapp iyo Thierry Henry oo isu wajahaya sidii oo ay yihiin labada feedh yahan ee dagaalku dhex marayo , wakhti ay ku sugnaayeen Istuudiyaha Telefishankaas.
Redknapp ayaa yidhi: ‘Saaxiibkay Thierry Henry wuxuu u haystaa inuu iga adkaan karo hadaanu fool ka fool isu guddo galno. Imika ayaanu taas kala saaraynaaye , iisoo bax niyow.’
Xidigii hore ee kooxaha Liverpool iyo Tottenham khadka dhexe uga ciyaari jiray ayaa ahaa kan aad moodo inuu labadooda aad u xanaaqsan yahay halka uu Henry ahaa mid degenaan badani ka muuqato.
Halyeygii Arsenal ayaa intuu madaxa madaxa aad ugu dhaweeyey hadalkana u raaciyey, ‘Waan ogahay inaad iga cabsanayso,’ kaas oo uu Redknapp kaga jawaabay: ‘Labadeena kee, aniga iyo adiguba laba nin oo xoog waa weyn baynu nahaye.’
Xaalada ayaa hadana mar kaliya degtay, iyadoo ay labadooduba qosol la kala jeesteen.
Dhacdadan ayaa xayaysiis u ahayd , Telefishanka Sky Sport mid uu dadka kaga codsanayay inay iska duubaan muuqaalo laba qof oo dagaal isu diyaarinaya oo kale ah, lacag badanina dhex taalo sida labada feedh yahan isla markaana ay ku qaybiyaan oo ku baahiyaan barta Bulshada ee Twitter , iyagoo isticmaalaya ‘Astaantah ‘ #H2H’.
Full Highlights and Goals : RB Leipzig 1-2 Besiktas
Riyad Mahrez Oo Abaalmarin Kale Kaga Guuleystay Vardy Iyo Kante + Sawirro
11/05/2016 Abdiwahab Ahmed
Celtic Oo La Hollin La’ yahay